ATMIS oo faahfaahin ka bixisay bandowga xerada Xalene | KEYDMEDIA ENGLISH
ATMIS oo faahfaahin ka bixisay bandowga xerada Xalene
Qoraal kasoo baxay Howalgalka Nabad ilaalinta (ATMIS) ayaa lagu sharraxay ujeedka bandowga lagu soo rogey Xerada Xalane, kaas oo socon doona ilaa sabtiga soo socda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hawlgalka Midowga Afrika ee ATMIS, ayaa sharraxaad dheeraad ah ka bixiyay bandowga ay ku soo rogeen Xerada Xalane, kaas oo dhaqan galay 10-kii bisha oo shalay ku beegneyd, waxayna iska fogeeyeen, wararka sheegaya in ay carqaladeynayaan dhaarinta Xildhibannada 14-ka April.
Bandawga oo soconaya ilaa 17-ka bishan Abriil, ayay sidoo kake, xuseen in uusan wax caqabad ah ku noqon doonin, dhamaanba howlaha kale ee geeddi-socadka doorashooyinka dalka, kuwaas oo hadda maraya meel gabagabo ah, maadaama 90%, la dhameystiray doorashooyinka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 11-aad.
“Xayiraaddaan ayaan sinnaba loogu talagelin in lagu carqaladeeyo, laguna qasbo in dib loo dhigo, ama lagu farageliyo habsami u socodka xafladda dhaarinta Xildhibaannada cusub, ama hawlo kale oo doorasho ama Xukuumad”, ayaa lagu yiri war ka soo baxay, Howalgalka Nabad Ilaalinta Kala-guurka ah ee Soomaaliya (ATMIS).
Sida ay xuseen, yoolka ayaa ah, in la fududeeyo xaqiijinta in Xeradu ahaato meel ammaan ah, oo aan wax walwal ah lahayn, inta lagu guda jiro xilligaan xasaasiga ah ee doorashada, oo ay ka mid yihiin dhaarinta, dabbaaldegga maalinta 62-aad ee Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan bisha Ramadaan.
ATMIS waxa ay sheegtay in ay la shaqeyneyso Ciidamada Ammaanka Soomaaliya (SSF) si loo xaqiijiyo in dhameystirka hannaanka doorashada lagu gaaro jawi wanaagsan oo ka caaggan rabshado, waxayna xuseen in ay la shaqeynayaan hay’adaha muhiimka ah si loo sugo ammaanka goobaha doorashada iyo musharixiinta.
Warka ka soo baxay (ATMIS), ayaa ku soo aaday saacado kadib, markii uu Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, kulan la qaatay qaar kamid ah wakiillada Beesha Caalamka, una caddeeyay in aan marnaba dib loo dhigi doonin dhaarinta Xildhibaannada oo dhaceysa 14-ka April.
Hawlgalka (ATMIS) ayaa baddelay Hawlgalkii (AMISOM), iyadoo la raacayo go’aankii Golaha Nabadda iyo Ammaanka (PSC) ee qabsoomay 08-kii Maarso 2022, kaasoo waajibiyey in ATMIS ay ka taageero DF hirgelinta Qorshaha kala-guurka ah ee ciidamada iyo hay’adaha amniga Soomaaliya, kula wareegaan amniga dalka.